Indlela yokwenza imbali ngaphandle isikhumba ngezandla zakho?
imikhiqizo Isikhumba bebelokhu kubhekwe isimo ngemfanelo ekhethekile. Akumangazi ukuthi abesifazane inaliti, hhayi kuphela kubo, kuphela ezikhanga yobuciko azisebenza le nto, ikakhulukazi uma kuziwa izisekeli noma izingubo zokuhlobisa. Futhi ngakho-ke cishe uyosizakala ibe isibonelo ewusizo ukuthi ungenza imbali ngaphandle isikhumba ngezandla zakho.
Mayelana izinto futhi izikimu
ekudalweni Ezenziwe Ngesandla lapho impahla main uba isikhumba - kuyajabulisa, kodwa ngesikhathi esifanayo inqubo intekenteke kakhulu. Into ungubani, akwanele nje ukuthatha isikhumba futhi athutha ulandele imiyalo ezinikezwe workshop. Kufanele akwazi ukuzwa lokho kwaziswa, ikakhulukazi uma maphakathi Ukwakheka imele imbali lesikhumba, adalwe yezandla zabo.
Kulabo ayaqala nje ukuze ufunde kabanzi mayelana lolu hlobo lobuciko, ukhetho best kuyoba impahla lesikhumba kuqala ethathwe imikhiqizo ubudala. A salokhu ibhantshi, amagilavu noma izikhwama. Kungani kubo? Iqiniso ukuthi imbali kwesikhumba, ngezandla zakhe obenziwa, kudinga impahla mncane kakhulu futhi ezithambile. Futhi ekukhiqizeni lezi zinto zokugqoka noma izesekeli isikhumba asitholayo ukucutshungulwa ekhethekile, okuvumela ukwenza kube ntofontofo kakhulu ukubamba.
Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo inqubo ukulungiselela kwesikhumba. Ukuze wenze lokhu, it is kamnandi kakhulu wagcoba ngensipho welulela phezu flat ukuze ezomile ngokugcwele.
Kodwa ukuze senze umbala, izikimu akhethekile akudingekile. Okuningi ngokunembile, ungasebenzisa njengoba uchwepheshe cut izingxenye, bese wakha izithonjana ngokwabo. Isimo kuphela: isikimu (okuyilona elisebenzayo futhi stencil) kumele. Lokho iyasikwa workpiece, okuyinto ke "kuvuna" e lesikhumba wobuciko.
Ring-imibala yesikhumba. kanjani ifeshini?
Ukuze udale trinket enhle, akudingeki kangaka edayisa izinto: isikhumba, ipensela ukwakha iluphu, workpiece ngaphansi ring, acrylic upende, isikelo glue isibhamu.
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukucacisa usayizi oyifunayo imbali. Ngemva kwalokho, isikhumba ngosizo stencil kufanele abone imizuliswano emibili usike abathume. Ngemuva kufanele bachazele nentaba inkanyezi nge sikelo ukunikeza ukuma efanele. Futhi badinga ingxenye elingunxande, okuyinto eyenza imbobo encane mpo.
Ngaphezu kwalokho, ubuso workpiece ngamunye ukudaya ithoni oyifunayo futhi ushiye kuze omiswe ngokuphelele. Ngemva kwalokho, izingxenye imbobo star emise senziwa ukuze yakha amacembe.
Manje ihlala yodwa ukuba babuthane elincomekayo ring imbali zesikhumba ngezandla zakho. Ngenxa yalesi nokusebenzisa isibhamu glue lufakwa ezimbili workpiece star emise ngendlela ukuthi isiphambano axhunyiwe. I nalutho unxande is nilimaza ukuze indandatho ukuze stamens kwamiswa abethela maphakathi. Imbali nomphumela is ethe njo workpiece indandatho.
inqubo yokuthumela uyisibonelo elula kanjani ukusebenzisa isikhumba, isikelo glue, ungakha yobuciko encane. Into esemqoka - ukuthuthukisa design kwangaphambilini kanye kahle wacabanga icebo stencil ukuze ukusebenza ngesikhumba kulethwa ujabule.
Kuyini cashmere - lokho elikumelelayo le indwangu? Izakhiwo, izinhlobo, amathiphu okukhetha futhi benakekela indwangu
Decoupage ikhadi - nekwenyusa emazinga amakhono
Dala origami Iqanda Modular
Funda ukwenza Modular origami ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi
Tatting Wabasaqalayo, noma kanjani ukufunda ukwenza lace
Pion efekethisiwe kudabuke: Master Class
Extra-curricular imisebenzi esikoleni SDA: uhlelo
"Mercedes Pulman" - eside elindelwe okunethezeka eseyintsha 2015
Isango Vienna - Isitsha ebalulekile isimiso sokujikeleza kwegazi wabantu
Round izingodo izindlu - Izinzuzo Ububi
Iningi horror movie ibhokisi ehhovisi: 10 eziphezulu
Cantrell sika pentad: izimbangela, ukwelashwa, onalesi sifo
I-Army Theatre: ikheli, isakhiwo sehholo, irepertoire, izithombe nokubuyekeza
Incazelo isifinyezo sezinto "eRobinson Crusoe"